10 Kharashka Jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee Ardayda Caalamiga ah 2022
10-ka Lacag ee Jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee Ardayda Caalamiga ah
Fiiri liiska khidmadaha jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ah ee aan ku soo ururinay boostada blog. Jaamacadaha ku yaal Ireland waa raqiis waxayna bixiyaan waxbarasho tayo leh, waxayna kuu noqon kartaa ikhtiyaar kugu habboon haddii aad go'aansato inaad wax ku barato Yurub.
Ireland waxa ay ka mid tahay wadamada aduunka ugu qanisan ee maxaan taas u sheegaa mise maxay kugu xidhan tahay in aad halkaas aad wax ka barato?
Maadaama uu yahay waddan qani ah, tani waxay ka dhigaysaa dawladdu inay lacag badan ku shubto qaybaha sida waxbarashada si ay u noqoto mid jaban oo la awoodi karo muwaadiniinta iyo ajnabiga labadaba. Taas ka sokow, fursadaha gargaarka maaliyadeed ee kala duwan sida deeqaha waxbarasho, deeqaha waxbarasho, wehelnimada, iyo fursadaha kale ee maaliyadeed ayaa caawiya ardayda.
Sidoo kale, waddan hodan ah, tani waxay ka dhigan tahay in dadka intiisa badani ay qani yihiin, sidaa darteed, heerka dambiyadu runtii aad buu u hooseeyaa. Heerka dembigu waa shay ay tahay inaad si dhab ah u tixgeliso markaad dibedda u baxayso. Inta uu hoos u dhaco heerka dambiyada, waa ka badbaado badnaan doontaa. Badbaadadu runtii waa heshiis weyn meel kasta oo aad tagto.
Ireland waa mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan Yurub iyo dalka ugu saaxiibka badan adduunka. Marka lagu daro quruxdeeda ethereal, waa ikhtiyaar ku habboon ardayda rajaynaysa inay dibedda wax ku bartaan. Tan waxaa lagu arkay tirooyinka, Ireland waa meesha ugu sareysa ee xulashada ardayda caalamiga ah.
Ardayda ka soo kala jeeda dhaqammo kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee nolosha ayaa halkan ku soo qulqula sannad walba si ay u sii wataan shahaadooyin tayo sare leh oo barnaamijyo tacliineed oo kala duwan ah. Barnaamijyadu waxay u dhexeeyaan ganacsiga, injineernimada, iyo bini'aadantinimada ilaa cilmiga bulshada, luqadda Ingiriisiga, iyo daawada kuwaas oo lagu sii wado shahaadada bachelor, master, ama heerka daraasadda doctorate.
Qaar ka mid ah jaamacadaha iyo barnaamijyada tacliinta ee Ireland ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka. Sidaa darteed, waxaad heli doontaa waxbarasho heer caalami ah oo aad ku qalin jabin doonto shahaado caalami ah oo la aqoonsan yahay. Sidoo kale, jaamacado badan oo ku yaal Ireland, inta badan kuwa dadweynaha, waxay aqbaleen ardayda caalamiga ah dhammaan barnaamijyadooda.
Boostada, waxaan ku soo diyaarinay liiska khidmadaha jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ah. Tani waxay ku siin doontaa aragti ku saabsan kharashka waxbarashada Ireland waxayna kaa caawin doontaa inaad u diyaargarowdo daboolida kharashka.
1 Waa maxay Celceliska Kharashka Jaamacadda Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
2 Ardayda caalamiga ahi ma heli karaan ka dhaafida khidmadaha waxbarashada Ireland?
3 Qiimaha Jaamacadaha Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
3.2 2. Dugsiga Ganacsiga Dublin
3.3 3. Machadka Farsamada ee Cork
3.4 4. Jaamacadda Limerick
3.5 5. Jaamacadda Qaranka ee Ireland (NIU)
3.6 6. Jaamacadda Dublin
3.7 7. Jaamacadda College Cork
3.8 8. Kuliyadda Griffith
4 FAQs ee liiska khidmadaha jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ah
Waa maxay Celceliska Kharashka Jaamacadda Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
Khidmadaha jaamacadda ee ardayda caalamiga ah ee Ireland waxay ku kala duwan yihiin barnaamijka aad dooratay iyo heerka waxbarasho. Barnaamijyada qaar ayaa ka qiimo badan kuwa kale oo haddii aad noqon doonto shahaadada koowaad ee jaamacadda, Master's, ama arday doctorate ah, kharashyadu sidoo kale way kala duwanaan doonaan.
Koorasyada ugu jaban ee lagu barto jaamacadaha Ireland sida arday caalami ah waa aadanaha, waxbarashada, iyo farshaxanka, halka koorsooyinka injineernimada, caafimaadka, ganacsiga, iyo maamulka ay aad qaali u yihiin.
Dugsiyada dadweynaha ee Ireland waa u bilaash ardayda ka socota mid ka mid ah dalalka EU iyo EEA. Ardayda aan Midowga Yurub ahayn, celcelis ahaan khidmadaha waxbaridda ee barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadaha dawladda waxay u dhexeeyaan € 6,000-€ 12,000 sanadkii. Halka ardayda jaamacadda iyo mastarka, khidmaddu ay u dhaxayso €6,150 ilaa €15,000 sannadkii.
Waxbarashada jaamacadaha gaarka loo leeyahay waa ka sarreeyaa waana inaad filaysaa in lagugu soo dalaco inta u dhaxaysa € 9,000 ilaa € 35,000 ee daraasadaha shahaadada koowaad iyo labaad.
Ardayda caalamiga ahi ma heli karaan ka dhaafida khidmadaha waxbarashada Ireland?
Jaamacadaha Ireland qaarkood ayaa ah ilo dhaqaale oo wanaagsan ardayda caalamiga ah. Waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo fursado maaliyadeed oo u dhexeeya mudnaanta iyo deeqaha waxbarasho ee baahida ku saleysan ilaa masters-ka si buuxda loo maalgeliyo iyo ka dhaafida khidmadda waxbarashada.
Marka, arday caalami ah ahaan, waxaad u qalmi kartaa ka dhaafida kharashka waxbarashada ee Ireland. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad buuxiso shuruudaha ama shuruudaha u-qalmitaanka si aad u hesho ka-dhaafitaanka kharashka waxbarashada.
Qiimaha Jaamacadaha Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
Hoos waxaa ku qoran liiska ugu hooseeya ee jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ah. Jaamacadaha ayaa si dheeraad ah looga dooday hoos iyadoo la raacayo xiriiriyeyaasha kugu habboon si aad wax badan uga barato dugsiga aad dooratay.
Machadka Teknolojiyada Cork
Jaamacadda Qaranka ee Ireland (NIU)
Jaamacadda University Cork
Trinity College Dublin waxaa la aasaasay 1592 taas oo ka dhigaysa kaliya maaha machad jaamacadeed ee ugu da'da weyn Ireland laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah toddobada jaamacadood ee qadiimiga ah ee Ingiriiska iyo Ireland. Jaamacaddu waxay sannadaheedii oo dhan u isticmaashay inay dhisto sumcad tacliimeed oo heer sare ah iyo karti cilmi baadhiseed. Tani waxay ka dhigaysaa qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadeeda diiradda saaraya cilmi-baarista kuwa ugu wanaagsan Yurub iyo adduunka.
Ardaydu waxay sii wadi karaan barnaamijyo tacliin oo kala duwan oo u dhexeeya cilmi-nafsiga iyo siyaasadda ilaa injineernimada iyo agabka heerka jaamacadeed iyo heerka jaamacadeed. Waa mid ka mid ah khidmadaha jaamacadda Ireland ugu hooseeya ee ardayda caalamiga ah waxayna siisaa fursado gargaar maaliyadeed oo kala duwan.
Kharashka waxbarashada ee Trinity College Dublin waa €7,500.
2. Dugsiga Ganacsiga ee Dublin
Markaad aragto magaca - Dugsiga Ganacsiga ee Dublin - waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso in tani ay tahay kaliya kulliyad ganacsi oo bixisa kaliya barnaamijyada ganacsiga iyo maamulka. Hagaag, waa hubaal inay aad ugu fiican tahay bixinta waxbarashada ganacsiga ugu sareysa dalka laakiin ma bixiso kaliya shahaadooyin ganacsi.
Dugsiga Ganacsiga ee Dublin waxa kale oo uu bixiyaa koorasyo ​​badan oo ku saabsan cilmiga bulshada, bini'aadantinimada, cilmi nafsiga, iyo farshaxanka kuwaas oo lagu bixiyo heerarka waxbarasho ee shahaadada koowaad iyo heerka jaamacadeed. Xarunteedu waa jawi firfircoon oo leh shakhsiyaad ka soo jeeda asal kala duwan oo ka diiwaangashan barnaamijyo kala duwan oo shahaado ah. Tababar khibradeed oo gacan-ku-ool ah ayaa la siiyaa ardayda si ay u horumariyaan nolosha ka dib dugsiga oo ay wax ku soo kordhiyaan bulshada iyo qaranka guud ahaan.
Kharashka waxbaridda shahaadada koowaad ee Dugsiga Ganacsiga ee Dublin waa € 10,000 sanadkii halka shahaadada koowaad ee jaamacadda ay u dhaxayso € 12,500 ilaa 13,500 sanadkii. Tani waa jaamacad u muuqata mid ka mid ah khidmadaha jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee ardayda caalamiga ah.
3. Machadka Farsamada ee Cork
Machadka Farsamada ee Cork, oo la aasaasay 1974-kii, kuna yaala magaalada Cork, waa dugsi caan ah oo waxbarasho sare ah. Jaamacaddan la awoodi karo ee Ireland waxaa loo sameeyay si ay u sii wado waxbarashada dhinacyada injineernimada iyo tignoolajiyada ee dalka, iyada oo asalkeedu ka soo jeedo Royal Cork Institution.
Machadku hadda waxa dhigta dad gaadhaya 17,000 oo arday. In kasta oo loo magacaabay machad farsamo, CIT waxay bixisaa koorsooyin fanka, ganacsiga, riwaayadaha, cilmiga dabiiciga iyo jirka, sharciga, iyo injineernimada.
Ganacsiga & Dadnimada, Injineernimada, iyo Sayniska ayaa ah saddexda kulliyadood ee ugu waaweyn. Dugsiyada iyo waaxaha kale waxay hoos yimaadaan saddexda kulliyadood. Waxbarashada ardayda caalamiga ah ee Machadka Farsamada ee Cork waxay u dhaxaysaa € 3,500 ilaa € 12,000 sanadkii.
4. Jaamacadda Limerick
Jaamacadda Limerick waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo caan ah oo ku taal magaalada caanka ah ee Limerick ee aagga Midwest Ireland. Waxaa la aasaasay 1972 waana tii ugu dambeysay ee lagu daro nidaamka jaamacadeed ee Ireland. Jaamacaddu hadda waxa dhigta ku dhawaad ​​16,000 oo arday. In ka badan 2400 oo arday oo ka kala socda in ka badan 100 waddan ayaa ka kooban tirada ardayda.
Sayniska iyo injineernimada, farshaxanka, cilmiga aadanaha, waxbarashada, cilmiga caafimaadka, iyo Kemmy Business School waa afarta kulliyadood ee aasaasiga ah ee jaamacadda. Ardayda jaamacadeed iyo kuwa jaamacadeedba waxay dooran karaan in ka badan 100 shahaado oo kala duwan. Waxay kaloo ahayd mid ka mid ah kulliyadihii ugu horreeyay ee dalka siiya ardayda fursad ay kaga qaybgalaan barnaamijka meeleynta shaqada ee iskaashiga ah
Iyada oo awooddeeda garaadka weyn, jaamacaddu si joogto ah ayaa loogu taxay 500-ka jaamacadood ee ugu sarreeya adduunka (sida ku cad qiimeynta QS) iyo sidoo kale 80-ka jaamacadood ee ugu sarreeya da'da 50. Kharashka waxbarashada shahaadada koowaad wuxuu u dhexeeyaa € 3,000 ilaa € 13,000 sanadkii iyadoo ku xiran barnaamijkaaga xiisaha.
Lacagta waxbaridda ee jaamacadda waxay u dhexeysaa € 3,000 iyo € 12,000 sanadkii iyadoo ku xiran barnaamijkaaga.
5. Jaamacadda Qaranka ee Ireland (NIU)
Liiskayaga shanaad ee khidmadaha jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee ardayda caalamiga ah waa Jaamacadda Qaranka Galway (NIU).
Jaamacadda Qaranka ee Ireland, oo guud ahaan loo yaqaan NUI, ayaa si fiican loogu yaqaanaa kaliya maahan waxbarashadeeda laakiin sidoo kale meesha ay ku taal. Galway waxay kasbatay naanaysyada "Magaalada ugu quruxda badan Ireland" iyo "Magaalada ugu saaxiibka ah ee Ireland." Macalimiin badan oo NUI ah ayaa lagu sharfay waxqabadkii ay ka geysteen waxbarashada, arday badanna waxay raacayaan raadkooda.
Jaamacadda Qaranka ee Ireland waa mid ka mid ah jaamacadaha Ireland ugu jaban. Jaamacadani waxay siisaa tiro aad u badan oo ah koorsooyin jaban iyo kuwo dhaqaale ardayda aan EU-da ahayn. 1845, Jaamacadda Qaranka ee Ireland ayaa la aasaasay. Waa hay’ad dawladeed. Waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan Ireland.
Koorsooyinka caanka ah ee ardaydu ku qaataan NIU waa injineernimada, caafimaadka, ganacsiga, cilmiga maamulka, cilmiga bulshada, iyo in ka badan. Khidmada waxbaridda ee ardayda caalamiga ah ee barnaamijyada shahaadada koowaad waxay u dhaxaysaa € 5,000 ilaa € 23,000 iyadoo kuxiran barnaamijka aad doorato. Halka khidmadaha ardaydu ka bilaabmaan €5,000 ilaa €18,000.
6. Jaamacadda Dublin
Kulliyadda Jaamacadda Dublin ayaa ka mid ah 1% machadyada ugu sarreeya adduunka. Waa mid ka mid ah jaamacadaha hormuudka u ah cilmi-baarista ee Yurub. Waxay bixisaa jawi waxbarasho firfircoon oo ku habboon waxbarashada heerka koowaad, masters iyo Ph.D. tababarka, cilmi-baarista, hal-abuurka, iyo maamulka bulshada.
UCD sidoo kale waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay jaamacada ugu hawlan ee Ireland oo ay dhigtaan in ka badan 33,000 oo arday oo laga soo kala qaatay 144 wadan. Xarumaha waxaa ka mid ah Xarunta Sayniska ee O'Brien, Dugsiyada Sharciga ee Sutherland, Dugsiga Ganacsiga ee Lochlan Quinn, Xarunta Moore ee Ganacsiga, iyo Xarunta Ardayda ee UCD.
Kharashka waxbarashada ee UCD wuxuu ka bilaabmaa € 6,700 sanadkii wuxuuna u muuqdaa mid ka mid ah khidmadaha jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee ardayda caalamiga ah.
7. Jaamacadda College Cork
Kulliyada Jaamacadda Cork (UCC) waa kulliyad ka kooban Jaamacadda Qaranka ee Ireland, waxayna ku taal Cork, magaalada labaad ee ugu weyn Ireland. In ka badan 20,000 oo arday, jaamacaddu waa mid ka mid ah xarumaha waxbarashada sare ee dalka marka loo eego diiwaangelinta ardayda. Waxa kale oo ay leedahay arday caalami ah oo baaxad leh oo qiyaastii ah 2500 arday.
Kulliyada caafimaadka iyo caafimaadka, iyo sidoo kale kulliyadaha aadanaha, injineernimada, ganacsiga iyo sharciga, iyo daraasaadka Celtic iyo cilmiga bulshada, ayaa ka kooban astaanta akadeemiyadeed ee jaamacadda. Intaa waxaa sii dheer, jaamacadda waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah xarumaha cilmi -baarista ugu sarreeya ee dalka, gaar ahaan dhinacyada nanotechnology, cilmi -baarista deegaanka, iyo tikniyoolajiyadda cuntada.
Layaab ma leh in jaamacadda lagu daray 2% ugu sarreysa jaamacadaha adduunka iyo sidoo kale 500 -ta jaamacadood ee ugu sarreeya adduunka, marka loo eego qiimeynta QS iyo Times Higher Education.
Lacagta waxbaridda ee UCC waxay ka bilaabataa € 10,000 sanadkii.
Liiskayaga ugu dambeeya ee Ireland, khidmadaha jaamacadaha ee ardayda caalamiga ah waa Griffith College.
Griffith College waa machad tacliin sare oo gaar loo leeyahay oo ku taal Dublin, caasimadda Ireland. Waa mid ka mid ah kulliyadaha gaarka loo leeyahay ee ugu waaweyn uguna sharafta badan. Machadka waxaa la aasaasay 1974 si loogu qalabeeyo ardayda mustaqbalka leh xirfadaha ganacsiga iyo xisaabinta.
Hadda waxa ay u kortay machad caalami ah oo laga aqoonsan yahay oo bixisa waxbarasho dhinacyo kala duwan ah oo aan ahayn ganacsiga. Kulliyadda Griffith hadda waxay leedahay ku dhawaad ​​​​7000 arday oo jaamacadeed iyo kuwa jaamacadeed ah oo isdiiwaangeliyay. Muuqaalka akadeemiyadeed ee kulliyadda waxa ku jira kulliyado kala duwan oo u dhexeeya ganacsiga iyo sharciga ilaa cilmi-baadhista iyo naqshadaynta dawooyinka. Ardaydu waxay heli karaan tiro badan oo koorsooyin kala duwan ah.
Kharashka waxbarashada ee Griffith College Dublin wuxuu ka bilaabmaa €12,000 ardayda caalamiga ah
Kuwani waa khidmadaha jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ah, kharashyadu way ku kala duwanaan karaan barnaamij ilaa barnaamij. Raac xiriirinta barnaamijka si aad u ogaato inta uu le'eg yahay kharashka barnaamijkaaga gaarka ah.
FAQs ee liiska khidmadaha jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ah
Ardayda caalamiga ah miyay bixiyaan ujro ka sareeya ardayda maxaliga ah ee Ireland?
Ardayda caalamiga ah ee Ireland waxay bixiyaan ujro ka sarreeya kan dadka deegaanka. Waxbarashadu waa bilaash 100% dadka deegaanka.
Sidee arday caalami ah uga fogaan karaa jaamacadaha aadka qaaliga ah ee Ireland?
Si aad uga fogaato jaamacadaha aadka qaaliga ah ee Ireland sida arday caalami ah, waa inaad dalbataa dugsiyada dadweynaha. Aad bay uga jaban yihiin kuwa gaarka ah waxayna bixiyaan fursado badan oo gargaar dhaqaale ah sidoo kale.
Sideen ku heli karaa jaamacadaha Ireland oo leh kharashyo la awoodi karo?
Ka hubi intarneedka dugsiyada jaban ama la awoodi karo ee Ireland ama weli si ka sii wanaagsan, si fudud u gal liiska ujrada jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ah. Dugsiyadan halkan ku taxan oo lagaga hadlay waa jaamacadaha ugu qaalisan Ireland ee ardayda caalamiga ah.
8 Masters ee ugu Fiican Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
8 Jaamacadaha ugu sareeya Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
13 Jaamacadaha ugu Fiican Australia Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadaha Waxbarashada Yar Deeqaha Yurub Dugsiyada Waxbarshada Bilaashka ah Barashada Hagaha Dibadda
Lacagaha jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ahLiiska khidmadaha jaamacadaha Ireland ee ardayda caalamiga ahliiska khidmadaha jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee ardayda caalamiga ah
Previous Post:Liiska Dugsiyada Ivy League ee leh Kharashkooda Hadda
Post Next:13 -ka Dugsi ee ugu Fiican Non Ivy League ee Pre Med